नयाँ सभामुखको दौड तिव्र, ओली प्रचण्डको समर्थन कसलाई « रिपोर्टर्स नेपाल
(Wednesday 28th October 2020)
नयाँ सभामुखको दौड तिव्र, ओली प्रचण्डको समर्थन कसलाई
काठमाडौं, २७ असोज । नयाँ सभामुखका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुबीच दौड तिव्र भएको छ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको पद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दाबी प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई राजीनामा दिन लगाई सभामुखमा नेकपाले दाबी गर्नेबारे दुई नेताबीच छलफल भएको छ । तर, उपसभामुखले कसलाई राजीनामा दिनेबारे संवैधानिक अड्चन रहेकाले समस्या परेको छ । सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेकपाभित्र सभामुखका लागि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच प्रतिष्पर्धा चलिसकेको छ । विगतमा पूर्व माओवादीका तर्फबाट महराले उक्त पद पाएकाले उक्त पक्षका नेताहरुबीच दौडधूप चलेको छ ।
पूर्व एमाले पक्षधरले पार्टी एक भइसकेकाले यो वा त्यो पक्ष भनेर सभामुख बनाउन नहुने अडान लिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । उनको नाममा सहमति जुट्न नसके शिवमायालाई नै बनाउनेबारे पनि परामर्श शुरु भएको छ ।
पूर्व माओवादीबाट ओनसरी घर्ती दौडमा अगाडि छिन् । टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेलले पनि सभामुखमा इच्छा देखाएका छन् । जर्नादन शर्माको नाम पनि अगाडि छ । प्रचण्ड ओनसरी या जर्नादन शर्मामध्येबाट सभामुख बनाउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ ।
सभामुख चयनबारे ओली र प्रचण्डबीच आजै बालुवाटारमा छलफल भएको छ । दुवै नेता प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे सहमत भएका छन् । दुवैले सम्भावित नामहरुबारे प्रारम्भिक छलफल गरेको बुझिएको छ । File Photo
ओलीको सन्देश बोकेर विष्णु पौडेल खुमलटारामा, केन्द्रीय कमिटी बैठक अनिश्चित्
काठमाडौं, १२ कार्तिक । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को यही कार्तिक १५ गतेदेखि
समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक सोचतिर बढि ध्यान दिनेहरु देखिए : लामिछाने (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १२ कार्तिक । सकारात्मक सोचका व्याख्यता आर.सी. लामिछानेले नेपालमा पछिल्लो समय सकारात्मकभन्दापनि नकारात्मक सोच
नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्किए
काठमाडौं, १२ कार्तिक । नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पेटर बड आफ्नो साँढे तीन वर्षको कार्यकाल
रअ प्रमुखसँग सुटुक्क भेटेको आरोप लागेपछि बाबुरामले भने : भीम मल्ल र भीमसेन थापालाई त्यत्तिकै मार्ने मेरो देश !
काठमाडौं, १२ कार्तिक । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.
रअ प्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्तामा आपत्ति जनाउनुहुन्न : डा. महत (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १२ कार्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. रामशरण महतले भारतका
गुप्तचरका कारण नेकपाको राजनीतिमा तरंग
काठमाडौं, १२ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनलेसिस विङ
काठमाडौं, कार्तिक १२ । वागमती प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईलाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ
विहार विधानसभा चुनावः मोदीको महामारीयता परीक्षा
एजेन्सी, १२ कात्तिक । भारतको विहार राज्यको विधानसभा चुनाव शुरु भएको छ । तीन चरणमा
नेकपाका साथीहरुले भ्रष्टाचारको अहिलेसम्म सिमा पुर्याईसकेका छन् : डा. लोहनी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १२ कार्तिक । राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिले देश विकास र